Ị nwere ike ikwere na ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ oge ahụ n'afọ ọzọ? Ọ bụ ihe ndị kasị mma oge nke afọ! N'ezie n'ime mmụọ na Best Christmas Markets na Germany! Site na mbubreyo November ruo mgbe Christmas Eve, n'ámá obodo Ahịa ekeresimesi juru na Germany niile. Dị ka otu n'ime ndị kasị oké ọnụ ahịa omenala na Deutschland (Germany na German), nnukwu obodo na obere obodo myiri usọrọ biakwa obibia oge. Ya mere jidere a na-ekpo ọkụ Foto Ụlọ Nga nke gluhwein na jikere nche chestnuts amịkpọ na ihe na-emeghe ọkụ a gaghị agbaghara ezumike ntụ ọkụ.
The obodo Christmas decorations nwere pụtara ịbụ na-ewu ewu na ndị obodo meghere a n'afọ House of Christmas. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị dị ka Christmas, mgbe nke a bụ maa bụghị ebe ndụ! A ụbọchị njem si Cologne ma ọ bụ Düsseldorf, gaa na-ekiri ndị obodo ìhè ná mgbede mgbe nibbling na ha mpaghara Monschauer Dutchen spongecake na sipping mulled mmanya tupu ị laghachi n'obodo. Na ya cobblestone n'okporo ámá, snow-topped ọkara osisi ụlọ, na asọfe iyi ọ bụ ihe ọ bụla na mkpirisi nke idyllic.
N'ezie, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị na Europe mara mma ochie obodo. Ọ bụ otú ọmarịcha ọ ese ihe dị ka a nkiri set. Nke a bụ eziokwu karịsịa na Christmas oge na esinam mba ụfọdụ nke Best Christmas Markets na Germany.
Ọdịdị nke ọnụ ụzọ ámá na ụlọ elu na -agbachitere na -egosi akụkọ akụkọ ifo. Dị ka unu na-abanye site na otu nke ochie ụzọ ámá, ị ga-ozugbo obi iru ala n'ime oge-okpono mgbidi a ihunanya ebe. Rothenburg enchantment ebuliwo na n'oge gara aga 1,000 afọ ma na -aga n'ihu na -asụ asụ ya na ndị ọbịa mba ofesi.
N'ihi na nke etiti ebe ke Munich Old Town, nke a bụ nke kasị nnọọ touristy na mmadụ jupụtara na ahịa, ma ọ bụ na-ewu ewu maka a mere: uloanumaanu mgbe uloanumaanu nke omenala ejiri mee crafts, nri dị ụtọ a ga -azụta, na ọnọdụ ịhụnanya niile nke Neues Rathaus. Jide n'aka na-ọbọgwụ n'ime n'ogige nke Rathaus ịhụ ndị ọzọ ụlọ na Christkindl post office, ebe ị nwere ike nweta a pụrụ iche Christkindl stampụ gị postkaadị / akwụkwọ ozi.
The Nuremberg Christkindlesmarkt, ma ọ bụ Nuremberg Christmas Market, bụ achọghị ịzụ Germany kasị ama Christmas ahịa. The Christmas ahịa na Nuremberg na Main Market Square ike deere azụ akwụkwọ mbụ banyere ya na afọ 1628, ma Nurembergers kwere ya ụbọchị laghachi ọbụna n'ihu.